🥇 ▷ iPad Pro 2020 wuxuu leeyahay war weyn oo leh LG ilaa buuq ✅
iPad Pro 2020 wuxuu leeyahay war weyn oo leh LG ilaa buuq
Wararka xanta ah ayaa ku faafaya internetka oo ku saabsan suurta galnimada cusboonaysiinta barnaamijka ‘Pro Pro’ ee dhici kara dhamaadka bisha Oktoobar. Hadda iyada oo loo sii marayo MacRumors oo soo xiganaya goobta Kuuriya ‘Elec waxaan barannaa in Apple uu qorsheynayo casriyeyn weyn oo iPad Pro ah bisha Maarso 2020. Laakiin maxaa si gaar ah uga hadlay barnaamijka’ IP Pro 2020 ‘?
IPad Pro 2020 ayaa soo bandhigi kara qalabka ‘ToF sensor’
Warka laftiisa waxba kama muujinayo waxa ku saabsan cusbooneysiinta gudaha ee ‘IP Pro’ ee Apple ay la micno tahay guga soo socda, laakiin waxay soo jeedineysaa in casriyeyn heer sare ah oo heer sare ah laga yaabo inay dhowaan soo socoto. Si qaas ah, waxay umuuqataa in kumbuyuutarka qaabeynta sedexameeyaha dhawaantan la siidaayay laga yaabo inuu kasoo baxo moodooyinka March 2020.
Jir ahaan, qaabka cusub ee kaameeradu waa inuu u ekaadaa iPhone 11 Pro, in kasta oo ay jiraan kala duwanaansho marka ay timaado waxqabadka. Websaydhka Kuuriya ayaa aaminsan in Apple ay heshiis la gashay LG si ay u siiso dareemayaasha ToF ee kiniiniyada soo socda. Mowjadahaani waxay gacan ka geystaan ​​soo qabashada xaddi weyn oo xog ah waxayna ugu dambeyntii awood u leeyihiin inay si weyn u horumariyaan khibradaha RA.
Kaameeraha ugu weyn waxaa wehelin doona qalabka ‘3D’ iyo waliba kamarad xagal ballaadhan. Si kastaba ha noqotee, suurtagalnimada Apple door bidida inay ku darto qalabka telephoto-ka jira ayaa jira, laakiin tani uma badna inay si weyn uga faa’iideysaneyso xaqiiqda jirta, waana sababtaas tan kaamirooyinka xagal ballaaran u muuqda.
Si kastaba ha noqotee moodooyinka ugu jaban ee iPad-ka Apple waxay u badan tahay inay dhaxli doonaan dareemayaashaas. Haddii shirkaddu dooratid inay cusboonaysiiso iPad Air laba iyo toban bilood ka dib, tani waxaa laga yaabaa inay dhacdo Maarso 2020, oo ay la socoto casriyeynta iPad Pro. Haddii kale, waxaa dib loo dhigi karaa dabayaaqada sanadka.
Ma jiri doonaan cusboonaysiinta barnaamijka ‘Pro Pro’ bisha Oktoobar iyo Maarso?
Apple waxay badiyaa cusbooneysiisaa moodhadooda iPad Pro 18-kii bilood iyo wixii ka dambeeya. Cusboonaysiinta bisha Oktoobar ee sannadkan, ayaa la sheegaa, inay jebinayso dhaqankan, laakiin shan bilood oo kale oo ka dib waxay umuuqataa mid aan caadi ahayn oo la doodi karo.
Ugu dambeyntiina, waxay umuuqataa inay jiraan saddex suurtagal oo horay loo socdo:
Marka hore Apple waxay iska indhatiraysaa cusboonaysiinta bisha Oktoobar, iyada oo door bidaysa casriyeyn gaar ah oo ka dhacda Maarso 2020, oo ay ku jiraan dareemayaasha 3D iyo kobcinta gudaha.
Sida laga soo xigtay Apple waxay diideysaa qorshooyinka loogu talagalay casriyeynta bisha Maarso 2020 iyo laadhaca bisha soo socota iyadoo la raacayo moodooyinka iPad iPad Pro ee 2019 oo ay kujiraan kumbuyuutar seddexjibaaranaya kambuyuutar gadaal ah.
Saddexaad: Apple wuxuu soo bandhigayaa moodooyinka iPad Pro 2019 oo leh Apple Bionic A13X iyo qaar ka mid ah isbeddelada kale ee gudaha. Kadib, bisha Maarso 2020, waxay soosaaraa moodallo cusub oo ay kujiraan dareemayaal dheeri ah oo kamaradaha gadaal ah.
Sannadkan iPhone 11 Pro iyo iPhone 11 Pro Max, sida aan horayba u soo xusnay, waxay muujinayaan saddex kamaradood gadaal ah. Laakiin laynka khadka iPhone Pro 2020, Apple waa inaad ku dartaa dareeraha ToF ee isku dhafka.
Si kastaba ha noqotee, wax yar ayaa laga ogyahay qorshayaasha xiga ee Apple ee sannadka soo socda ee iPhones. Si kastaba ha noqotee, wararka ka soo baxa websaydhka ‘Elec’ wuxuu xaqiijinayaa dareemayaasha 3D. Tani waxay soo jeedineysaa in sida lamid ah jiilka soo socda ee iPad Pros, iPhones of Apple 2020 ay adeegsan doonaan dareemayaal ay soo saartay LG.
Casriyeynta kale ee iPhone 2020 baaxadda leh waxaa ka mid noqon kara ProMotion 120Hz oo lagu soo bandhigi karo moodooyinka Pro iyo qalabka OLED, sida kuwa laga helay sannadkan iPhone 11 Pro aaladda caadiga ah ee iPhone 12.
Isbedelada kale waxaa ka mid noqon kara USB-C oo lagu daydo Pro-brand, 5G-buuxa oo taageero ah, ku dallacsiinta ku-dallaca bilaa-waayirka. Si kastaba ha noqotee, waxaan ku lahaan karnaa naqshad cusub gebi ahaanba moodooyinka qaaliga ah, oo yareyn kara cabirka muraayadda keliya isla markaana ku dhajin kara 5.4 iyo 6.7 inch shaashado halkii laga heli lahaa cabbirrada 5.8 iyo 6.5 ee jira.